DVB လာဘ်စားမှု ဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာပြီ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » DVB လာဘ်စားမှု ဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာပြီ။
DVB လာဘ်စားမှု ဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာပြီ။
Posted by blaze on Oct 2, 2011 in Myanma News, News | 24 comments
ငွေအလွဲသုံးစားရှိနေနိုင်တယ်ဆိုပြီး တာဝန်ရှိသူတွေက စက်တင်ဘာလ ၃၀ မှာ
သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်.. အလွဲသုံးစားလုပ်တာ ၂၀၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဒေါ်လာ
၃သိန်းလောက်- မြန်မာငွေ သိန်း ၃၀၀၀ လောက်လို့ခန့် မှန်းပါတယ်..
ငွေကြေးအရှုပ်အရင်းကြောင့် တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရတဲ့ အေးချမ်းနိုင်
ပါဝင်ပါတ်သက်မှု မရှိပေမယ့် အဖွဲ့ အစည်းတခုလုံး စီမံခန့် ခွဲရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေး
တာဝန်ယူထားတဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးအေးချမ်းနိုင်နဲ့ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှုး
ဦးခင်မောင်ဝင်းတို့ က စီမံခန့် ခွဲရေးတာဝန်ကနေ နှုတ်ထွက်ပေးပါတယ်..
ငွေကြေးအရှုပ်အရင်းကြောင့် တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရတဲ့ ခင်မောင်ဝင်း
့ပါတ်သက်ပြီး အဖြေမှန် အမှုမှန် အခြေအနေမှန် သိရအောင် နော်ဝေရဲဌာနမှာ အမှုဖွင့်ပြီး
စံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလမှာ ဘုတ်အဖွဲ့ ဝင် စပ်ဟန်ညောင်ရွှေက DVB
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးတာဝန် ယာယီ ထမ်းဆောင်ပါမယ်။
ရဲက အမှုဖွင့်ခံထားရသော မျိုးမင်းနိုင်
( မဲဆောက်နေ ပွ ကြီးဆိုသူကို တွေ့ ရင် သတင်းပေးကြပါ။ သူလဲတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တယ်။ )
တော်လှန်ရေးရံပုံငွေတွေကိုအလွှဲသုံးစားလိုက်တဲ့ ဒီဗွီဘီ ၀န်ထမ်းတွေကို ထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့ 
တောင်းဆိုပါတယ်။ မဲဆောက်ရုံးတာဝန်ခံ က မျိုးမင်းနိင်ဖြစ်တယ်။ တော်လှန်းရေးရံပုံငွေတွေကို အလွဲသုံး စားလုပ်တဲ့ ပြသာနာများအရင်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးသော်လည်း ထိရောက်စွာအရေးမယူနိင်ခဲ့ကြဘူး။
(ဓါတ်ပုံ- နော်ဝေးရဲက ပြည်သူပိုင်ငွေ အလွဲသုံးစား အမှုအဖွင့်ခံထားရတဲ့ဒီဗွီဘီ ယူဂျီတာဝန်ခံ မျိုးမင်းနိုင်။)
ဥပမာ ဇော်နိင်ဦး (လူဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှုး ) ဟာလဲ တော်လှန်ရေးရံပုံငွေတွေ ကို ထင်တိုင်းသုံးဖြုံးခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကျိုးရှာ အကျင့်ပြတ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ သူဟာ ယခုအခါမှာ နော်ဝေး နိင်ငံ အော်စလိုမြို့ မှာပဲ ခိုအောင်းနေဆဲဖြစ်တယ်။ သူကိုလဲ ထိရောက်စွာအရေးယူဖို့ လိုတယ်။
ဒီဗွင်္ီဘီ ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံက အမျိုးသားရေးသိက္ခာကျမှုကြီးပဲ။ တာဝန်ရှိသူတွေကို အရေးယူပေးဖို့ လိုမယ်။အခုဟာ က သူခိုးကြီး တွေကသူခိုးလေးကိုဖမ်းတဲ့ အမှု လိုပဲဖြစ်နေသေးတယ်။ ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းတခုမှာ ဒီလိုရှက်ဖွယ်လိလိ ဖြစ်ရပ်တွေကို အရေးမယူနိင်ရင် ၊ မသန့် ရှင်းနိင်ရင် စစ်အစိုးရကို ဒီမိုကရေစီပေးပါ ၊ လဘ်စားမှုတွေရပ်ဆိုင်းပါလို့ ပြောနေတာဟာ ကိုယ်ကိုကိုယ်မှန်နဲ့ ကြည့်ပြောနေသလိုပဲဖြစ်မယ်။ အချောင်သမားတွေကို မတိုက်ရဲရင် အမှန်းတရားအကြောင်းကိုမပြောတာကောင်းတယ်။
နယ်စပ်က အလုပ်သမားအဖွဲ့ ကြီးတခု၊ နိင်ငံရေးအကျဉ်းသားအတွက်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ တွေ၊ လူအခွင့်ရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ တွေ၊ ပါတီတွေ နဲ့ မီဒီယာတွေမှာ ကိုယ်ကျိုးရှာမှုတွေအကြီးအကျယ်ရှိနေတာဟာအလွန်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တွေဖြစ်တယ်။
သူတို့အချင်းအချင်း ဒိုက်ပုံတွေလိုပဲ စုပေါင်းမိနေကြတယ်။ ဒါတွေကိုဖေါ်ထုတ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ နိင်ငံတကာအကူညီတွေဟာ နယ်စပ် က တချို့ လူတွေက အကြီးအကျယ်အလွဲသုံးစားမှုတွေကြောင့် မထိရောက်ပဲဖြစ်နေရတယ်။
တကယ်လို့ကျနော်တို့ ဟာ အလွန်လဘ်စားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုတော်လှန်ဖြတ်ချပြီးရင် တော်လှန်ရေးအရေခြုံလဘ်စားတဲ့သူတွေကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်
ဖွယ်ရှိနေတယ်။ ကျနော်တို့ သင်ယူခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးစံနှုန်းတွေဟာ အခုပျောက်ဆုံးနေတာဟာသိပ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ ဒီလူတွေအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုသိရက်မြင်ရက်နဲ့ မပြောရဲကြဘူး။ ဆက်လက်ခေါ်ပြောနေတယ်ဆိုတာသိပ်ကို ရှက်စရာကောင်းတယ်။ လဘ်စားမှုတွေကိုဖေါ်ထုတ်ဖို့ အတွက် ကျနော်တို့ ဟာ ” If you see something, say something ” ဆိုတဲ့မူကို စတင် ကျင့်သုံးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
သူတို့ ကိုထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းနာတွေကိုဆွေးနွေးကြဖို့ 
ပြောကြဖို့ လိုပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ ကောင်တွေ ဒီတိုင်းသွားမှာပဲ ကောင်းတဲ့ ကောင်တစ်ကောင်မှတွေ့ဖူးဘူး …မိန်းမတွေလိုပဲ ( မိန်းမနဲ့ နှိုင်းတာတောင် မိန်းမတွေ နာဦးးမယ် )
သူပြောသလိုဆို မိန်းမတွေက မကောင်းတာကျနေတာပဲ
မိန်းမဆိုတဲ့အမျိုးကို ယုတ်ညံ့ သိမ်ဖျင်းတဲ့ အမျိုးများထင်နေသလား … တဆင့်နိမ့်လူတန်းစားတွေလို့စိတ်ထဲ မှတ်နေသလား မပြောတတ်ပါဘူး … ။ မပတ်သတ်သတ်ပဲ နေနိုင်လား မေးကြည့် …. ဒါလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး … ။ အမေဆိုတာလည်း .. မိန်းမထဲက မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုတာ ပြန်သတိရပါဦး ..
နှိုင်းစရာရှားလို့ … ဟွန်း :mad:
ကိုသစ်မင်းရေ … ( မိန်းမနဲ့ နှိုင်းတာတောင် မိန်းမတွေ နာဦးးမယ် )ဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့ ပြန်ပိတ်ထားလို့ … ဒီထပ် ပိုမပြောပဲ … မမြင်သလိုပဲ နေလိုက်တော့မယ် … ။
Why ” ကိုသစ်မင်း ” ???
that naing oo (သက်နိုင်ဦး) နဲ့(thit min)သစ်မင်း ဘာမှလဲမဆိုင်ပါဘူးဗျာ။
Thanks indeed Bro.FR.
If you didn’t say “Why ကိုသစ်မင်း ???”, I never notice it.
ကိုသစ်မင်းရယ် နှစ်ကိုယ်ခွဲထားတာ မိသွားရင်လည်း မိသွားတယ်ပေါ့၊ ဘာဖြစ်လည်း အီးတုံးက ဆဲရုံအပြင် ပိုမပြောနိုင်ပါဘူး။ အလကား လေသာကြီးနေတာ၊ လူလုံးက လေတိုက်ရင် လမ်းမှာတွေ့တဲ့ သစ်ပင်ဖက်ထားရတယ်။ (သူ့ဘဲနဲ့ ချက်တင်မှာပြောရင်း သိထားတာ)
sori … ငှက်ပျောသီး စားချင် … ၀ယ်ကျွေးမလို့
ဆောရီးပါ ကိုသစ်မင်းရေ …
အချိန်တွေ waste ဖြစ်မှာ ဆိုးလို့ … browser တစ်ခုထဲ tab နှစ်ခု သုံးခု ပြိုင်ဖွင့်ထားတာလေ .. (ပို့စ်တွေများနေလွန်းလို့ … အဲ့ဒီလိုကို အမှီလိုက်ဖတ်နေရတာ .. )တဖက်မှာ ကိုသစ်မင်းစာဖတ်နေရင်း … ဒီကော့မန့်ကို ရေးဖို့ တဖက်ကလည်း ဖွင့်ထားတော့ … နာမည် မှားရိုက်မိတာ … အဟီး ။ ချက်ချင်း ပြန်မရှင်းတာ …ရယ်ချင်နေလို့ ….. အသည်းသန်ပဲ ငြင်းတော့တာပဲ ဟိဟိ
@that naing oo
“မကောင်းတဲ့ ကောင်တွေ ဒီတိုင်းသွားမှာပဲ ကောင်းတဲ့ ကောင်တစ်ကောင်မှတွေ့ဖူးဘူး မိန်းမတွေလိုပဲ ( မိန်းမနဲ့ နှိုင်းတာတောင် မိန်းမတွေ နာဦးးမယ် )”
ဒါဘယ် သဘောရောက်သွား လဲဆို တော့ မကောင်းတာလုပ်တာ ဆိုရင် မိန်းမ တွေပဲလို့ အဓိပ္ပာယ် ပေါက်သွားပါတယ် ။ မိန်းမတွေ ကိုနှိမ်တဲ့ အသုံးအနှုန်း လို့ ထင်ပါတယ် ။
လောက်ကောင်တွေပါလားဗျာ။ပြည်ပြေးတွေက ဟိုရောက်လဲခိုးစားတုန်း ဘယ်ရောက်ရောက် ဆက်ခိုးမယ် ခိုးမယ်။
ကျုပ်တို့ပေးထားငွေ.. (အမြတ်ခွန်အပါအ၀င်) တပြားမှမပါ.. မသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်.. အနေသာကြီးလို့.. တွေးမိတာပဲ..။ နော်ဝေးအစိုးရထောက်ပံ့ ငွေတွေဆိုရင်.. နော်ဝေအစိုးရက.. မကျေမနပ်ဖြစ်ရမဲ့ကိစ္စလို့ထင်တာပဲ..။
မီဒီယာအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့.. ဖွသပေါ့…။ ဖွကြပါပေါ့..
အဖွလွန်ပြီး.. နော်ဝေအစိုးရထောက်ပံ့ ကြေးထပ်မပေးရင်.. အဲဒီသတင်းဌာန ပိတ်ရမယ်ဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုဖြစ်ရင်.. တကယ်နစ်နာမှာက..သတင်းငတ်နေတဲ့.. မြန်မာလူထုပဲလို့.. သိထားကြစေချင်တာပါပဲ..။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီဗွီဘီမှ.. တပြားတချပ်မှ မရထားပါကြောင်း။
လာဘ်စားမှုဆိုတာ ဘယ်ခေတ် ဘယ်စံနစ်မှာမဆို အနဲနဲ့အများ ရှိတတ်ပါတယ်။ စားဝတ်နေရေး မ လောက်ငှလို့ လာဘ်စားတာကို မပြောလိုပေမဲ့။ လစာကောင်းနေတဲ့ လူတွေကတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ဟုတ်တယ်ဗျ။ စားဝတ်နေေ၇း မပြေလည်လို့ ခိုးတာဆို တစ်မျိုးပေါ့။ အခုဟာက ရှိသထက်ရှိချင်ကြတာ။ ခက်တယ်ဗျာ ဒီလိုလူတွေရှိတော့ မဆိုင်တဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံေ၇းလှုပ်ရှားတဲ့ လူတွေပါ ခြားထဲက အပြောခံ၇အုံးမယ်။
မြန်မာလူမျိုးချင်းချင်း ပြောရတာတော့မကောင်းပါဘူး။ ငွေရေးကြေးရေး နဲ့ပါတ်သက်ရင် စိတ်ချရတာမျိုးမရှိပါဘူး။ အစကတော့ ဟုတ်မလိုနဲ့ နောက်တော့ အဖျားရှူးသွားကြတာပါဘဲ။ ငွေမြင်ရင် လက်သွက်ကြသူတွေချည့်ပါဘဲ။ ၀မ်းနဲစရာကောင်းတာကတော့ ဟုတ်တာတွေလဲရှိသလို၊ ကောဠာဟလလိုချဲ့ကားကြတာတွေလဲဒုနဲ့ဒေးပါ။ အမှန်တရားကဘယ်တော့မှမပေါ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မြန်မာ community နဲ့ပါတ်သက်ရင်မြန်မာအချင်းချင်းကတောင် ထည့်ဝင်လှူဒါန်း၇မှာ လက်တွန့်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သတင်းကြားတိုင်းဖမ်းပြီးတရားနာပြီး ပျက်ရာပျက်ကြောင်းအရသာခံပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုတော့ (အလကားရတိုင်း/ပိုက်ဆံမပေးရတိုင်း) ဖျောက်ကြဘို့ရပ်တန်းက၇ပ်ကြဘို့တော့လိုပြီ ထင်ပါကြောင်း။
ဘုရားတွေ မှာ လဲ ဂေါပက (အချို့ ) လုပ်စားသလို
ဒီဗီဘီ လို နေရာမျိုးမှာ
ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသင့်ပါတယ်။နောက်မလုပ်ရဲတော့ အောင်အရေးယူရမယ် ကိုယ့်ညီကိုတို့ ရေ။
ဟိုခေတ်ဒီခေတ်၊ဟိုစံနစ်ဒီစနစ် ၊ဟိုအစိုးရဒီအစိုးရ၊ပြောမနေကြပါနဲ့ဗျာ ၊နေရာတကာမှာလာဘ်စား၊ အလွှဲသုံးစားရှိနေတာပါ။ ဘာနဲ့ဘဲအုပ်ချုပ်၊ ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရှိနေမှာဘဲလေ။
အင်း လာဘ်စားမှု တိုက် ဖျက် ဖို့ အသံ တွေ ဟစ်နေတဲ့ သူတွေ ကို ယ်တိုင် လည်း အခွင့် အရေးရ ရင် စားကြတာပါ လားမောင်တို့ ရေ လာဘ် ဆိုတာ ကြီးက တော်တော်ကောင်းပုံရတယ်
မီဒီယာတွေ၊ သတင်းသ္မားတွေ၊ ဘလော့ဂါ တွေ ဆိုတာ သဘာဝပေါ်အခြေတည်၊ အမှန်တွေဖေါ်ထုတ် လောကရဲ့ သက်ရှိ၊သက်မဲ့ အားလုံအတွက် ကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကိုယ့် ကိုပိုင် အချိန် တွေ ပေးဆပ်၊ အရေး/အပြောမတတ်ရင် – သူများဆဲတာခံရသေး ကဲ ဘ၀မှာသူတို့အတွက် ဘာကျန်သေး လို့လည်း၊ ( အဲလိုခံယူချက်နဲ့ လုပ်နေကြတယ်လို့ ကျုပ်ကထင်ထားတာ၊ လေးစားခဲ့တာ) ခုလို ကြားရလို့ အရမ်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါကြောင်း၊တကယ်အဟုတ်ဆိုရင်တော့ – ခြေမ မကောင်းခြေမဖြတ် သင့်ပါ ကြောင်း၊ တော်လှန်ရေးမှ အပြီးတိုင် မောင်းထုတ်သင့်ပါကြောင်း။
ပြောကြည့်ချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ် နိုင်ငံရေးလုပ်ပါတယ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကိုယိကျိုးမဖက်ဆိုတာတွေဟာတစ်ကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်အမျိုးအတွက် သာမက ကိုယ်.ကျော်ကြားမှု့ တွေအတွက်ဖဲလုပ်ကြတာပါ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ညစ်ပတ်သူတွေရဲ့ 
ပြိုင်ပွဲမဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းကြရအောင်ပါခင်ဗျာ
ခြေမ မကောင်းခြေမ ၊လက်မ မကောင်းလက်မ ပါ ။
သတင်းဌာန နဲ့ မဆိုင်ပါ ။
တစ်လှေလုံးကောင်းဖို့ ၊ ငါးခုံမ တစ်ကောင်လောက် ဖယ်ပစ်ရတာ မပြောပလောက်ပါဘူး ။
သူ့လမ်း သူရွေးသွားတာပါ ။